दोस्रो शताब्दीमा नै भव्य शहर रहेको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने प्रयत्न पुनः सुरु (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
दोस्रो शताब्दीमा नै भव्य शहर रहेको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने प्रयत्न पुनः सुरु (भिडियो)
प्रकाशित मिति : Jan 18, 2020
१. दोस्रो शताब्दीमा नै भव्य शहर रहेको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने प्रयत्न पुनः सुरु
तिलौराकोटलाई पनि विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने प्रयत्न फेरि सुरु गरिएको छ । भगवान गौतम बुद्धको जीवनको युवावय वितेका तिलौराकोट प्रचार प्रसारको अभाव सदैव ओझेलमा पर्दै आएको छ ।
राजा शुद्धोदनको ऐतिहसिक दरबार रहेको तिलौराकोटको यस अघि गरिएको उत्खननबाट पनि दोसो शताब्दीमा तिलौराकोट भव्य शहर रहेको पुष्टि भएको थियो ।
भगवान गौतम बुद्धको जन्म अघि पनि तिलौराकोट भव्य र सभ्य शहर रहेको पुष्टि भइसकेको छ ।
बुद्ध जीवनीका महत्वपूर्ण अध्यायहरु तिलौराकोटसंग गाँसिए पनि यो अझै पनि धेरैको नजरबाट मात्र नभइ विश्व सम्पदा क्षेत्रबाट पनि अलग रहदै आएको छ । तर यसपटक पुनः थालिएको उत्खननले धेरै प्रमाणहरु जुटाउने अवस्था देखिएको छ ।
पहिला भेटिएका प्रमाणमा थप पुष्टि हुने गरी धेरै प्रमाणहरु थपिदै गर्दा यसपटक तिलौराकोट विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश हुने सम्भावना बढेको उत्खननमा समावेश विज्ञहरुको विश्वास छ ।
२. भ्रमण बर्ष २०२० लाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले गाउँठाउँमा पर्यटन प्रवद्र्धनको कार्यक्रम तीब्र
भ्रमण बर्ष मनाइदै गर्दा जिल्ला जिल्लामा र स्थानीय तहहरुमा पनि बिभिन्न गतिविधिहरु हुन थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिकामा अवस्थित वराह मन्दिरमा पनि विशेष मेलाको आयोजना गरिएको छ ।
भ्रमण बर्ष २०२० लाई सहयोग पुग्ने हेतुले आयोजित विशेष मेलामा देशका बिभिन्न भागबाट धर्मभीरु वराह मन्दिरमा पुगेका थिए । अर्घाखाँचीको एक मात्र गोही पाइने मन्दिरकोरुपमा रहेको वराह मन्दिरमा आयोजित मेलामा पुग्नेहरुको विश्वास छ । मागेको र मनले चिताएको वराह भगवानले पूरा गर्नेछन् ।
३. पाल्पाका गाउँगाउँमा सुन्तला पाकेर पहेलपुर, २ करोड बढी रकम सुन्तला विक्रिबाट पाल्पा भित्रिदै
यतिखेर पाल्पाका गाउँठाउँ सुन्तला पाकेरै पहेलपुर बनेको छ । सुन्तला विक्रिबाट करोडौ भित्र्याउने अवस्थामा पुगेका पाल्पाली किसानहरु पनि हर्षित बनेका छन् ।
पाल्पामा यसपटक फलेको सुन्तला हेर्दा एउटै किसानले प्रतिघर ३ देखि १० लाख रुपैयाँ सम्म भित्र्याउने अवस्था देखिएको छ । अन्य बालीहरु मासेर सुन्तला खेतीतर्फ आकर्षित भएका पाल्पाली किसानहरुलाई सुन्तलाले त्यो विश्वास दिलाएको पनि छ ।
यसपटक सुन्तलाले पाल्पामा २ करोड बढी रकम भित्र्याउने अनुमान गरिएको छ । पाल्पाको हावापानी पनि सुन्तलाको उत्पादनको लागि सुहाउँदो हुँदा पाल्पामा उत्पादित सुन्तलाको चर्चा देशभर नै हुने गरेको छ ।